​एसिडिटिबाट छुटकारा पाउने घरेलु उपाय
हाम्रो व्यस्त जीवनशैलीको कारण एसिडिटीको समस्या पछिल्लो समयमा बढ्दै गएको छ । एसिडिटीको कारण पेट पोल्ने, अमिलो पानी आउने, अपच हुने जस्ता समस्या देखिन्छ ।
धेरै समयसम्म भोकै बस्ने, असन्तुलित खानपिन, जंक फूडको सेवनले आजकाल धेरै मानिसहमा एसिडिटीको समस्या देखिन थालेको छ ।
​कतै तपाईँलाई यस्ता लक्षण त देखापरेका छैनन् ? सावधान ! मुटुको रोग हुनसक्छ
न्यूजलय शुक्रबार २१, पुष २०७४
साना समस्यामा चासो नदिनु मानवीय स्वभाव हो । तर, सनाना–साना स्वास्थ्य समस्या मुटु रोगका लक्षण हुन सक्छन् । मुटु रोगका लक्षण साझा तर अनौठा खाल्का हुन्छन् । यस्ता समस्याप्रति बेलैमा सचेत भएमा रोग फैलिन र बढ्नबाट जोगिन सकिन्छ । यस्ता छन् मुटु रोगका केही लक्षणहरु....
धेरै गुलियो खाँदै हुनुहुन्छ ? सावधान ! दिमाग सुस्त होला
हालै गरिएको एक अध्ययनका अनुसार, धेरै गुलियो खाँदा हाम्रो शरीरमा चिनीको असर देखिन थाल्छ जसकारण हाम्रो दिमागको कार्यक्षमता सुस्त हुँदै जान्छ ।
अनुसन्धानका क्रममा फलफूलमा भएको प्राकृतिक चिनी वा कृत्रिम चिनी सेवन गर्ने व्यक्तिको तुलनामा साँच्चिकै चिनी खाने मानिसले सुस्तता अनुभव गरेको पाइयो । < p>
​काठमाडौंका ठूला अस्पताल नै ‘ठग’को सूचिमा
काठमाडौँ । राजधानीका ठूला अस्पतालहरु ठगीको सूचिमा परेका छन् ।
काठमाडौंका ठूला अस्पतालहरुमध्येका बल्खुस्थित बयोधा हस्पिटल, धापासीको ग्रान्डी ईन्टरनेशनल अस्पताल, बसुन्धाराको ईशान बाल तथा महिला अस्पताल र बाँसबारी स्थित नेशनल ईन्टिच्युट अफ न्युरोलोजी एण्ड एलाईड साईन्सेज प्रा.लि.ले ठगी गरेको भन्दै आपुर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता....
​डल्ले खुर्सानी खानुहोस्, ग्यास्ट्रिक र अल्सरबाट बच्नुहोस् !
खानाका परिकारलाई स्वादिष्ट बनाउन खुसार्नीको प्रयोग गरिन्छ । त्यसमा पनि डल्ले अर्थात अकबरे खुसार्नीलाई विशेष मानिन्छ । डल्ले खुर्सानीको नियमित प्रयोगले ग्यास्टिक तथा अल्सर जस्ता रोगबाट बच्न सकिन्छ । डल्ले खुर्सानीमा पाईने क्याप्सिसिनका कारण रोगीलाई फाईदा पुर्याउँछ ।
डल्ले खुर्सानीको नियमित सेवनले रोगहरू निको....
रेडीमेड अचार खानु हानिकारक !
खानामा तिख्खर स्वाद खोज्नेहरुलाई अचार चाहिन्छ । गोलभेडा, धनियाँ, नुन–खुर्सानी मिसाएर बनाएको अचारले हरेक गाँसलाई स्वादिलो बनाउँछ ।
ताजा अचार खानु सामान्य हो । यद्यपी अचार भनेपछि त्यसमा पिरो र नुनिलोको मात्रा बढी हुन्छ । यसले स्वतः शरीरमा नुनको मात्रा बढाउँछ । अचारको पिरोले....
​सबै महिलाले अनिवार्य जान्नै पर्ने महिनावारीका भ्रम
महिनावारी भनेको शारीरिक परिवर्तनमध्येको एक परिवर्तन हो । यो महिलाको शरीरमा भएका रागरसहरूको मात्रामा आउने परिवर्तनका कारणले हुने गर्दछ । महिनावारी प्राकृतिक सरसफाइ प्रक्रिया हो ।
सबै महिलाले जान्नै महिनावारीका भ्रमहरु
१. मन लागेको जे पनि खान सक्नुहुन्छ
महिनावारी भएको समयमा केहि....
​जाडोमा रुघाबाट बच्न अपनाउनुहोस् यि उपायहरु
अहिले हाम्रो देशमा चिसो बढ्दै गएको छ । धेरै मानिसहरुलाई रुगाखोकीले पनि सताउन थालेको छ । रुघाखोकी प्रायजसो मौसम परिवर्तन हुँदा देखापर्दछ । यो सरुवा प्रकृतिको रोग भएकोले विश्वमा रुघा खोकी बाट पिडित नहुने व्यक्ति पाउन गाह्रै पर्छ । किनभने मानिसलाई जिवनमा एक न एकपटक....
२. हर्मोनल परिवर्तनः....